ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ဖြစ်ကေ အိမ်မှာ ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲ? | Great Arakan
Home Health ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ဖြစ်ကေ အိမ်မှာ ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲ?
Thermally inefficient housing, cost of heating and not wearing enough clothing is thought to be behind the number of hypothermic pensioners presenting to emergency departments in Victoria. Photograph: Education Images/UIG/Getty Images/Universal Images Group
ယူကေနိုင်ငံ အမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့(NHS) ဝပ်ဆိုက်က တိုက်ရိုက် ကူးယူပနာ ဘာသာပြန်ထားပါရေ။
လူအများစုက ကိုဗဲ့ဒ်M-၁၉ (COVID-19) ဖြစ်လို့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းချေအတွင်းမှာ ပြန်ကောင်းလားကတ်ပါရေ။ ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ဖြစ်ကေ အိမ်မှာ ကိုယ့်စွာကို ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲဆိုရေ အချက်အလက်တိကို အောက်မှာ ဖော်ပြလားပါမေ။
ပထမဆုံး နီမကောင်း ဖြစ်နီရေခါ၊ သငယ်ချင်း တယောက်ယောက်ကို ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုဝင် တယောက်ယောက်ကို ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပနာ ကိုယ့်အခြေအနေ ဇာပိုင် ရှိနီလဲဆိုစွာကို နာရီခြားတိုင်း မိန်းခိုင်းပါ။ အပါးချေမှာ ရှိရေ လူဆိုကေ အခန်းပြင်က လာပနာ မိန်းခိုင်းပါ။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထွက်ပနာ စကားမပြောပါကဲ့။
ကိုယ်ပူရှိန် တက်နီကေ ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲ?
ကိုယ်ပူရှိန်ရာ တက်နီကေ၊ အပူကျအောင် အေပိုင် လုပ်သင့်ပါရေ –
အနား အများကြီး ယူပါ
ကိုယ်ထဲက အရည် ခမ်းခြောက်စွာကို ကာကွယ်နိုင်အောင်၊ အရည် (ရီ အကောင်းဆုံး) အများကြီး သောက်ပါ။ ကိုယ့် သီးရည် မဖြစ်စလောက်ရာ အဝါရောင် သန်းပနာ၊ ကြိုင်နီအောင်ထိ သောက်ပီးပါ။
နီလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းရေပိုင်တွိကေ ပါရာစီတမိုးလ်( paracetamol )ကို ဆီးဘူးအညွှန်းမှာ ညွှန်ကြားထားရေအတိုင်း သောက်ပါ။
ခြောင်းဆိုးနီကေ ဇာပိုင် ပြုစုရဖို့လဲ?
ခြောင်းရာ ဆိုးနီကေ၊ အကောင်းဆုံးက အိပ်ယာမှာ ပက်လက် လဲနီရေ အနီအထားကို ရှောင်ပါ။ ကိုယ် တဇောင်း လဲကေ လဲ၊ မဟုတ်ကေ မတ်မတ် ထိုင်ပနာ နီပါ။
ခြောင်းဆိုး သက်သာအောင် ပျားရည် ၁ ဇွန်းစီ သောက်ပီးပါ။ အသက် ၁၂ လ အောက် အချေတိကို ပျားရည် လုံးဝ မတိုက်ပါကဲ့။
ခြောင်းဆိုး မသက်သာကေ၊ ဆီးဝါး ပညာရှင်တယောက်ကို ခြောင်းဆိုးသက်သာအောင် ဇာပိုင် လုပ်ရဖို့လဲ ဖုန်းဆက်ပနာ အကြံဉာဏ် တောင်းကြည့်ပါ။
အရေးအကြီးဆုံး – ဆီးဆိုင်ကို လုံးဝ မလားပါကဲ့
ကိုယ်တိုင် ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ ဖြစ်နီရေ လူ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုဗဲ့ဒ်-၁၉ လက္ခဏာ ပြနိန်ရေ လူနန့် နီရရေ လူ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာရာ နီပါ။ လုံးဝ အပြင် မထွက်ပါကဲ့။
အပြင်က လူတိကို ဖုန်းနန့် ဆက်သွယ်ပနာရာ အကူအညီ တောင်းပါ။
အိမ်တွင်း အောင်းရရေခါ ဇာပိုင် အကူအညီ တောင်းဖို့လဲ?
အိမ်တွင်း အောင်း(stay at home)ပနာ အပြင်လူနန့် တိုက်ရိုက် မဆက်ဆံဘဲ နီရရေအချိန်(self-isolate)မှာ၊ သငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုဝင်တိလည်း အနားဝန်းကျင်မှာ မရှိကေ၊ အပြင်က သာရေးနာရေး ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းတိကို ကိုယ့်အခြေအနေ အမှန်ကို ဖုန်းဆက်ပြောပြပနာ အကူအညီတောင်းခံပါ။
အစားအသောက်နန့် ဆီးဝါးတိကို ဖေသာပြန်ပီးပနာ ဝယ်ပီးကတ်ဖို့ အကူအညီတောင်းကြည့်နိုင်ပါရေ။
အသက်ရှူရ ခက်ကေ ဇာလုပ်ရဖို့လဲ?
အသက်ရှူရ ခက်ကေ၊ အခန်းကို အီးအောင် လုပ်ပါ။
ပဒင်းပေါက်တိကို ဖွင့်ထားပါ။ လီပင်ကာ မသုံးပါကဲ့။ လီပင်ကာက ဗိုင်းရာ့ဆ်ကို နီရာတိုင်း ပျံ့နှံ့လားဇီနိုင်ပါရေ။
အောက်က နည်းလမ်းတိကိုလည်း စမ်းကြည့်ပါ –
ခုံမှာ မတ်မတ် ထိုင်ပါ။
လီကို နခေါင်းနန့် ရှူပနာ၊ ပဇက ပြန်ထုတ်ပါ။ နခမ်းတိကို ဖယောင်းတိုင်မီး သတ်တေခါ လီ မှုတ်တေ ပုံစံမျိုးနန့် ပြန်ထုတ်ပါ။
ခုံမှာ မတ်မတ် ထိုင်နီပါ
ပက်ခုံးတိကို တင်းမထားဘဲ ဖြီချော့ထားပါ၊ ခါးကို ကုန်းပနာ မထိုင်ပါကဲ့
လက် ၂ ဖက်ကို ဒူးမှာ တင်ပနာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခိုင်ရေ ခုံ ၁ ခုံကို ကိုင်ပနာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခါးကို ဖြောင့်ဖြောင့် ဆန့်ဗျာလ်၊ ရှိဖက်ကို တစိချေ ကိုင်းထားပါ
အသက်ရှူရ ခက်ကေ စိတ်ယောက်ယက် မခတ်ဇီပါကဲ့။ စိတ်ယောက်ယက်ခတ်စွာက အသက်ရှူရ ပိုခက်ခဲဇီနိုင်ပါရေ။
အသက်ရှူပုံ ရှူနည်းကို အောက်က ဗီဒီယိုမှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။
Previous articleကဗာကြီး တခေတ်ဆန်းဖို့ 2nm chip ကို IBM တွိ
Next articleငါရို့ တိုင်းပြည်ကို ဇာပိုင် တည်ဆောက်ကတ်ဖို့လဲ? (၁)